C/raxmaan Dheeg oo ka mid ahaa raggii weerarka ka geystay Hoteel Dayax ee Muqdisho (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
C/raxmaan Dheeg oo ka mid ahaa raggii weerarka ka geystay Hoteel Dayax ee Muqdisho (SAWIRO)
Ilo xog-ogaal ah aynu heleyno ayaa sheegaya in mid ka mid ah raggii shalay weerarka kusoo qaaday Hoteel Dayax ee magaalada Muqdisho uu ahaa askari hore uga tirsanaa maamulka Jubbaland balse markii dambe ku biiray dagaalyahanadda Al-shabaab.
Askarigaasi oo lagu magacaabi jiray C/raxmaan Fatxi C/laahi Dheeg ayaa la sheegayaa inuu baxsaday kadib markii 19-kii Febraayo ee sanadkii 2014 uu magaalada Kismaayo ku dilay taliyihii hore ee ciidamada nabad-suggida maamulka Jubbaland Ciise Alaaki oo lagu naaneesi jiray “Ciise Kaambooni”, kaas oo ay qaraabo dhaw ahaayeen.
Ninkaas ayaa la sheegayaa in markii dambe uu isku soo dhiibay dagaalyahanada Al-shababaab ee ku sugnaa degmada Jilib ee gobolka J/dhexe, wuxuuna ahaa ninkii kaxeeysnayay gaariga weyn oo ay ku rarnaayeen dhuxusha, kaas oo ku hor qarxay Hoteelka dibadiisa.
Dhinaca kale, ciidanka nabad-sugidda qaranka ayaa haatan wadda baaritaano ay ku ogaanayaan ragga kale heydtooda iyo meelaha ay hore uga tirsanaayeen.
Si kastaba ha ahaatee, weerarkii shalay lagu qaaday Hoteel Dayax ee magaalada Muqdisho ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyootay illaa 20 qof, iyadoona 50 kale ay ku dhaawacantay, waxaana weerarkaasi mas’uuliyadiisa sheegtay Xarakada Al-shabaab.